Ithegi: iimvakalelo | Martech Zone
Le infographic evela kwiVenkile yeSmart ixoxa ngekamva lomdibaniso womsebenzisi ngaphaya kwescreen sokuchukumisa. Mhlawumbi olona hlobo lomsebenzisi luhambileyo ndilusebenzisa namhlanje ukubukela kwam iApple. Ukudityaniswa konxibelelwano oluninzi, uxinzelelo, amaqhosha, kunye nokucofa kuyinkimbinkimbi. Kwaye ngeminwe yam emikhulu, ayisoloko ingamava angenamthungo. Ndonwabile ngekamva! Unxibelelwano loMsebenzisi wexesha elizayo kunye neNdawo yokuNxibelelana kwiVenkile yeTekhnoloji ichaza ezinye iitekhnoloji ezisecaleni kokutshintsha ukuhlangana komsebenzisi: IiHolografi - Microsoft